Ama-anti Slip Safety Tread Plates Factory - China Anti Slip Safety Tread Plates Abakhiqizi, abahlinzeki
Uhlangothi lwe-Aluminium Sheet
Ama-aluminium ne-aluminium alloys kancane kancane aba ngamalungu aqinile ezimbonini ezahlukahlukene zesimanje njengamanje. Okwamanje, imikhiqizo esezingeni eliphakeme yama-alloys ajwayelekile e-aluminium manje idlala indima ebalulekile empilweni yethu.
I-Anti Slip Checker Plate Stair Nyathela
Ama-anti-Slip Safety aluminium tread Plates enziwe ngokwezifiso futhi angakhiqizwa ukuhambisana nanoma yiluphi uhlobo lwendawo olungaba olushelelayo, oluyingozi noluyingozi okungukuthi i-steel mesh / grille, ipuleti eli-checkered, ipuleti le-aluminium, ukhonkolo, izingodo.
Ngesisekelo sokuhlukaniswa okungenhla kwama-aluminium alloys, amapuleti e-aluminium nawo angahlukaniswa abe izinhlobo eziningi. Isimiso sokuqala esibalulekile yipuleti le-aluminium.
Ishidi le-Aluminium Panel
Intengo yephepha le-Aluminium ayigcini nje ngokunqunywa ngento eyodwa. Izintengo zemakethe ze-aluminium ne-aluminium alloys zizoshintsha kaningi, ngakho-ke amanani entengo eluhlaza we-aluminium panel sheet awahlali ndawonye. Ngaphandle kwamanani entengo eluhlaza, intengo yephepha le-aluminium izothinteka ngezinye izizathu eziningi.
I-1100 Aluminium Plate ekukhiqizeni
Kusekhona izici ezihlukile kakhulu nezakhiwo ze-8 series aluminium alloy. Ngoba le ndawo esezingeni lokuqala yama-alloys asuselwa ku-aluminium, ipuleti le-aluminium cast manje selisetshenziswe kakhulu emphakathini wanamuhla. Ngakho-ke, ukuthi ungayikhetha kanjani ipuleti leshidi le-aluminium elifanele kakhulu ebhizinisini lakho nokuthi ishidi le-aluminium lingakanani zonke izinkinga okufanele zixazululwe ngokushesha.
1060 Aluminium Plate Iyathengiswa
Ishidi lesibuko se-Aluminium libhekisela kupuleti elincane le-aluminium elenziwe ngezinqubo ezahlukahlukene njengokugoqa nokupholisha. Kubonakalisa ukukhanya kahle, kubizwa nangokuthi ishidi elivezayo. Kuvamise ukufakwa ungqimba omncane wokuvikela ukumboza indawo evele kuyo. Imibala ejwayelekile ifaka phakathi okwesibhakabhaka, isiliva, ophuzi noluhlaza okotshani.